ပြား Filter ကိုနှိပ်ပါ ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ဝေသူနှင့်စက်ရုံမှ ပြား Filter ကိုနှိပ်ပါ အကြောင်းသင်သိရန်လိုအပ်သည်။
CHI SHUN MACHINERY PLANT CO., LTD. ထူးချွန်ထက်မြက်ဒီဇိုင်နာများ, အင်ဂျင်နီယာ, ပို့ကုန်စီးပွားရေးသမား, ဈေးကွက်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စီမံခန့်ခွဲမှုအင်အား numbers မ​​ျားရှိသည်။ သုတေသနနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးဆဲခြင်း, နိုင်ငံခြားအဆင့်မြင့်နည်းပညာသုံးလိုက်နာကျင့်သုံးဖို့, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနုပညာနှင့်လက်မှုပညာနှင့်ပြည့်စုံခြင်းနှင့်တိုးတက်ကောင်းမွန်ရေး, အရည်အသွေးပေါ်အလေးအနက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှတဆင့် ပြား Filter ကိုနှိပ်ပါ အထူးအနုပညာနှင့်လက်မှုပညာဖြစ်လာခဲ့သည်။
ပုံစံ - AWS
အဝတ်လျှော်စက်နှင့်အတူ Chamber Filter ကိုနှိပ်ပါ
AWS စီးရီးသည် ACS စီးရီးနှင့်ဆင်တူသော်လည်းအဝတ်လျှော်ခြင်းအတွက်အချိန်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေသည့်အဝတ်လျှော်စက်အပါအဝင်.
ပန်းကန်အရွယ်အစား ACS စီးရီးကဲ့သို့တူညီသော,800x800 မှ 2000x2000 အတွင်းရှိနိုင်သော်လည်းအရွယ်အစားနှင့်အရေအတွက်အတွက်လိုအပ်သလိုပြုလုပ်နိုင်သည်.
အဝတ်လျှော်စက်ကို SUS မှပြုလုပ်သည်-ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းတိုးချဲ့ဖို့ချေးနှင့်ဓာတ်တိုးခံနိုင်ရည်သော 304 ပစ္စည်း.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.sludgetreatment.com.tw/my/plate-filter-press.html
အကောင်းဆုံး ပြား Filter ကိုနှိပ်ပါ ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက် ပြား Filter ကိုနှိပ်ပါ ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူ ပြား Filter ကိုနှိပ်ပါ ကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဝယ်ယူရန်အတွက်၊ Taiwan